Baro Ciyaarta Nice | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 10, 2011 Isniin, Oktoobar 10, 2011 Douglas Karr
Haddii aad dib u milicsato taariikhda balooggan, waxaad ogaan doontaa inaan ku faraxsanahay helitaanka tikniyoolajiyad cusub iyo inaan wax ku barano akhristayaashayada iyaga. Haddii aysan shirkad sameynaynin wax anshax xumo ah ama doqon cad ah, caadi ahaan waxaan ku qanacsan nahay qaabkeenna. Ma doonayo in balooggan uu weynaado oo waxaan aasi karnaa shirkadaha qaar annagoo dhiirrigelinna kuwa kale… si daacadnimo ahna waa ii niyad jabaysaa markii qaar ka mid ah asxaabteyda kale ee caanka ah ay tallaalkaas si cad u qaadaan.
Sida ugu dambeysay ee shalay, waxaan helay cabashooyin Trolls. Waa maxay troll?
Iskudhafka internetka, troll waa qof ku dhajiya farriimaha xanaaqa, khaaska ah, ama mawduucyada mawduucyada bulshada internetka, sida wadahadalka internetka, qolka sheekaysiga, ama blog, ujeedada koowaad ee ah in akhristayaasha looga xanaajiyo jawaab dareen ah ama haddii kale carqaladeynta dooda mawduuca caadiga ah.
Waxaan ku dari lahaa labo dabeecadood oo kale… trolls caadi ahaan waa fulayaal waxayna ku gabadaan aqoonsi la'aan. Iyo boggan, trolls badanaa waxay isku dayaan inay waxyeello u geystaan ​​shirkadaha aan wax ka qorayno.
Waxaan isku dayi doonaa dhowr jeer inaan ka jawaabo troll, laakiin markaan arko iyaga oo maciin bidaya magacyo iyo iska indha tirida xaqiiqda, waan joojinayaa lahadalkooda. Waxaan u ogeysiiyay meheradda inay dhaleeceeyeen. Haddii ganacsigu isku dayo inuu xalliyo xaaladda oo uusan awoodin (taas oo ah mid caadi ah sababtoo ah qarsoodi), waan ka saari doonaa faallooyinka.
Sababta Taasi miyaanay ahayn in shirkad la siiyo baas? Ma caqli xumo baa?
Uma maleynayo sidaas. Markii aan wareysanayo shirkad, aan helayo shaashadda shaashadda, oo aan sharraxayo codsigooda, iskuma dayo inaan kuu sameeyo go'aan wax iibsi. Waxaan qorayaa qoraal kooban oo blog ah oo ku saleysan suuqgeynta shirkadda, jawaab celin ama qeexitaannada sheyga oo aan la wadaagayo waxa qalabku yahay iyo sida aan aaminsanahay inay ka caawin karto suuqgeynta. Shirkadahaasi waxay si adag u shaqeeyeen si ay shey u soo saaraan oo ay u galaan qatar aad u weyn iyagoo naftooda u saaray inay canaantaan.
Dadka qaarkiis si fudud ayey u neceb yihiin shirkadaha (waxaan inbadan aragnaa dhawaanahan). Waxaan u hayaa macmacaan iyaga ah maxaa yeelay waxaan u soo shaqeeyay dhalinyaro badan oo bilow ah. Waxaan arkay allabaryo - lacag, waqti iyo qoysba - oo dadku sameeyaan si ay isugu dayaan inay wax uga qaataan fikrad, riyoonaya run. Taasi waxay qaadataa tan shaqo… shirkadaha badankoodna runti ma guuleystaan. Ma doonayo in shirkadaha ay burburaan… daawashada aasaasayaasha iyo shaqaalaha oo wax walba lumiyaan. Qofna waa inuusan.
Faallo hal diidmo ah ayaa shirkad gelin karta difaaca. Waxaan arkay inay ku dhacday mid ka mid ah shirkadaha aan u shaqeeyay… qof ayaa dhaleeceeyay ganacsiga qadka internetka waligoodna ma aysan soo kabanin tan iyo markii boostada ay noqotay mid fayras ah oo ku dhaawacantay inay ku jirto wadahadal kasta oo iib ah sanadka soo socda. Waxay ahayd mid qallafsan… oo aan loo baahnayn. Kaliya maahan hoggaamiyeyaasha awood u leh inay mar dambe sameeyaan, sidoo kale content hal nuxur fudud ayaa bilaabi kara dhimbiil ganacsi ku hoos socodsiiya.
Marka, waxaan dareemayaa inaan saaran yahay masuuliyad labada aqrista iyo shirkadaha iyadoo la siinayo dadka faa'iidada shakiga. Haddii faallo bixiyuhu doonayo inuu ka soo baxo hooska oo si wax ku ool ah u dhaleeceeyo shirkad - taasi waa wadahadal weyn in la yeesho. Laakiin markii ay wax garaacaan oo duqeeyaan boostada si qarsoodi ah, si fudud uma dulqaadan doono. Waxaan ka jawaabi doonaa hal ama laba jeer ka dibna wadahadalku waa la dhammeeyaa. Haddii ay sii wadaan, ma siin doono fursado kale.
Waxaa jira shirkado badan oo aan ixtiraam ka waayey sanadihii la soo dhaafay… laakiin iskuma dayi doono inaan baabi'iyo. Anigu si fudud uma siinayo iyaga wax fiiro ah oo ku saabsan balooggan. Taasi waa fursadda aan haysto - dhiirrigelinta shirkadaha waaweyn oo aan iska indhatiro kuwa u baahan inay baxaan. Haddii aad rabto inaad igula tartanto mid ka mid ah qoraalladayda, waan soo dhaweynayaa dhaleeceynta! Laakiin haddii aad kaliya qaylinayso oo aad magacyo wici doonto, maahan inaan dhagaysto.
Waxaan rajeynayaa wadahadalkeena sii socda!